Fampielezankevitra Mampididoza ao Makedonia Mikendry ireo Masoivoho Tandrefana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2017 4:56 GMT
“Taorian'ny kabary nataon'i #Gruevski’, namoaka fampielezankevitra iray maneho filazam-pahafatesana ho an'ireo masoivoho #US & ireo firenena mikambana ao anatin'ny #EU ny #VMRO taorian'ny fampihorohoroany.” Avy amin'ny mpampiasa Twitter @andrejas_mkd.
Miaraka amin'ireo mpitarika ny fanoherana sy ireo ONG, mikendry ireo masoivoho vahiny ankehitriny ny fampielezankevitra ataon'ireo mpomba ny governemanta.
Ny 11 Desambra 2016 teo, nandeha nifidy ry zareo Makedoniana, saingy tsy mbola hazava ny amin'izay antoko hahazo ny maro an'isa hanangana ny governemanta. Ezaka nifampiraharahana nataon'ny Fiombonambe Eoropeana no nanaovana ilay fifidianana manokana hifidianana ireo parlemantera mba hamerenana ny fahamarinan-toeran'ny firenena izay lasibatry ny olana politika nanomboka tamin'ny 2015 niporitsahan'ireo fihainoana tsy ara.dalàna ny antso an-telefaona nataon'ny governemanta amperinasa. 36,66 isanjato (ho an'ny Sosialy Demaokraty) ary 38,14 isanjato (ho an'ny VMRO-DPMNE), ireo no vato azon'ireo antoko roa matanjaka indrindra ao amin'ny firenena, ka tsy ahitàna izay antoko tena manana ny maro an'isa hanohana azy ao amin'ny antenimiera.
Hatramin'ny fifidianana, somary feno fandranitana ny kabary fandresena lahatra ataon'ny VMRO-DPMNE, antokon'ny eo amin'ny fitondrana.
Ny 19 Desambra, nisy mpisera amin'ny aterineto tsy nitonona anarana nandefa mitambatra ny sarin'ireo masoivoho misolo tena ny Fiombonambe Eoropeana (izay avy any Slovenia sy Estonia), ny an'i Etazonia, Angeletera, Pays-Bas, ary ny an'i Italia namboarina tamin'ny “photoshop” mba hiendrika filazam-pahafatesana (jereo etsy ambony).
Lasibatra ireo masoivoho taorian'ilay kabary tamin'ny 17 Desambra niampangan'ilay Praiminisitra taloha sady mpitarika ny antoko VMRO-DPMNE, Nikola Gruevski, ireo solotenam-pirenena mpikambana ao amin'ny OTAN, toa an'i Etazonia sy ny Fiombonambe Eoropeana, ho “mijabajabaka.” Tamin'ny 2015, sady nagatahan'i Makedonia hidirana ny OTAN sy ny Fiombonambe Eoropeana. ary nanasa azy ireo izy hanampy ny firenena hamaha ny olana politikany. Tafiditra amin'io ny fanarahana maso akaiky ny fametrahana ireo fanovàna.
Nolazain'i Gruevski fa :
Amin'ny fandraisana fanapahankevitra dia tsy maintsy manana ny fiandrianany ny firenena. Nanomboka nijabajabaka tamin'ny politika anatin'ny firenena ny sasany tamin'ireo masoivoho. Tsy maintsy atsahatra izany. Mijanona misokatra amin'ny fifandraisana amin'ireo masoivoho sy ireo solontenan'ny firenena hafa rehetra isika, saingy ireo masoivoho sasany nanomboka nitsabaka loatra tamin'ny politika anatiny eto amintsika, tsy maintsy atsahatra ny fanaovany izany.
Nanambara ihany koa i Gruevski fa nialàn'ny antokony, izay mpikambana ao amin'ny Antokom-Bahoaka Eoropeana, ny fifampiresahana izay ireo solontenan'ny vondrona iraisampirenena no nandrindra azy. Kabary nataony io nandritry ny hetsipanoherana iray nikendrena hnaovana tsindry amin'ny Kaomity Nasionaly misahana ny Fifidianana mba hamoaka didy manome tombony ny VMRO-DPMNE manoloana ireo honohono fisiana hala-bato nataon'ny mpanohitra. Nandritra ilay hetsi-panoherana, namelatra sorabaventy iray ireo mpanohana ny VMRO-DPMNE, nataon'izy ireo ho an'i Jess Baily, masoivoho Amerikàna, izay mivaky hoe, “Aza akasikasika an'i Makedonia ny tànanao.”
ireo mpanohana ny VMRO-DPMNE miaraka aminà sorabaventy iray “Baily aza akasikasika an'i Makedonia ny tànanao!” Sary an'i A1on.mk, nahazoana alàlana.
Vondrona iray hafa avy amin'ny elatra havanana mpanohana an'i Gruevski tao anatin'io hetsi-panoherana io ihany koa no nitondra sorabaventy nivaky hoe “Donald Trump, tianay ianao!”
Tao amin'ny haino aman-jery sosialy, marobe no nampitaha ny fankahalàna vahiny sy ny kabarin'i Gruevski tamin'ireo nataon'ilay filoha serba efa nodimandry Slobodan Milošević, izay nahitàna fiatahana amin'ny iraisampirenena ny politika mpandàla vahoaka nampihariny. Ireo mpandalina notanisain'ny Deutsche Welle dia nampitandrina hoe raha mitohy io, “Tandindonin'ny lozan'ny fikisahana mankany amin'ny fitondrana jadona i Makedonia.”
Tanaty tafatafa anaty lahatsary natao tety anaty aterineto ho an'ilay fandaharana fampahalalambaovao sangany, “360 degrees”, nambaran'i Erwan Fouéré, masoivohon'ny Fiombonambe Eoropeana fahiny, fa “manafintohina” ny kabarin'i Gruevski ary nomarihany fa ireo mpandray fitenenana avy amin'ny antokon'ny fitondrana dia manatevina laharana ireo izay “nihantsy sy niteraka korontana” ka isan'ireny ny minisitra fahiny sy amin'izao fotoana izao misahana ny raharaha ivelany. Momba ilay fanambaràna dia nanontany izy hoe :
Izany ve no lazainy fa politikan'ny governemanta? Ary raha tsy izany, dia maninona ny praiminisitra no tsy miloa-bava? Ary indrindra, aiza ny praiminisitra, matory ve? Dia ahoana ny amin'ny filoha, matory koa ve izy? Ireny olona ireny no tokony hiantso fitoniana sy fifehezantena amin'izao fotoana tena isian'ny fihenjanana izao, saingy toa mangina tanteraka ry zareo.
Ireo filazam-pahafatesana hosoka dia nisarika kely ihany ny sain'ny mpampahalala vaovao nandritry ny andron'ny 19 Desambra. Namoaka ny fanehoankevitra ofisialy avy aminy ny VMRO-DPMNE iny hariva iny, nilaza tao anaty hafatra an-gazety fa “tsy azo ekena” ny sary tahaka izany. Tsy hita ao amin'ny tranonkala ofisialin-dry zareo ilay fanambaràna.
Ora maro talohan'ny namoahana ireo filazam-pahafatesana natao ‘photoshop’, nisy mpamono olona namono ny masoivoho Rosiana tao Tiorkia. Novinavinain'ireo mpampiasa haino aman-jery sosialy ao Makedonia fa mety hanosika fampielezankevitra misintona mankany amin'ny fampitahorana asa fampihorohoroana atao an'ireo masoivoho io, noho ireo zavatra nitranga tao Tiorkia.
Tao anaty fotoana tena ratsy indrindra ho an'ireo mpamorona sy mpamoaka ireo filazam-pahafatesana ho an'ireo masoivoho ao Makedonia no nisehoan'ilay famonoana ny masoivoho Rosiana.
Sahin'ny sasany tamin'ireo mpampiasa haino aman-jery sosialy mihitsy aza ny nangataka ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany mba handray andraikitra amin'ilay olana:
Misy vokany mampididoza ny fankahalàna vahiny, sa tsy izany? Noho izany, atsaharo ny fanelezana azy io!
Tsy ireo masoivoho ihany no nifantohan'ny mason'ny VMRO-DPMNE taorian'ny fifidianana. Ireo sangany ara-politika avy amin'ny antoko ao anatin'ny fiaraha-mitantana, toa an'i Amdi Bajram, ihany koa ka hatramin'ireo mpanohana ao anatin'ireo mpiarada amin-dry zareo, izay nidradradradra ampahibemaso ny hamonoana ilay mpitarika ny mpanohitra, Zoran Zaev.
Fifidianana tao Makedonia: Raha sanatria tsy arakareo, manao matso milanja tanambokovoko fitondra mandevina nasiany ny anaran'i @Zoran_Zaev ireo mpikatroky ny VMRO. Mpampianatra any an-tsekoly ramatoa io…